नेपालको संविधान, भारतको त्यो कठोर नाकाबन्दी र दलहरूकाे नियत (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
नेपालको संविधान, भारतको त्यो कठोर नाकाबन्दी र दलहरूकाे नियत (भिडियो)
काठमाडौं । संविधान शिरानी होस् आम नेपाली जनताको । संविधान रक्षाको कवच होस् सबै नेपालीको । संविधान त्यो सुत्र बनोस्, जस्ले आम नेपालीलाई एउटै मालामा उनेर राखोस् । चार जात ३६ वर्णको साझा भाषा बनोस् संविधान, पूर्वदेखि पश्चिम र हिमालदेखि तराईसम्मका आम नेपालीका लागि श्रद्धा र आस्थाको केन्द्र बनोस् संविधान । हरेक नेपालीलाई हरफ हरफ, बुँदा बुँदा र सबै धाराहरु आत्मीय बनुन् । देश र जनतालाई जोडिरहोस् यही संविधानले । आदरणीय दर्शकवृन्द संविधान दिवसको अनगिन्ती शुभकामना आम नेपालीमा ।
धेरैको चाहना थियो यो संविधान नबनोस्, दृश्य अदृश्य शक्तिहरुले पनि नखेलेका होइनन् । संविधान बन्न नदिएर र बने पनि आफ्नो स्वार्थ लाँदेर सविधान ल्याउने तिनीहरुको अभिष्ट पूरा गरेन् यो संविधानले । मुलुक र आम नेपाली जनतामा समर्पित भन्दै तत्कालीन संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई समान अधिकार दिएको भन्दै खुसिलायी पनि देशभर मनाइयो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीतालाई महत्वपूर्ण मर्मकोरुपमा संरक्षण गर्दै संविधानको घोषणा गरियो । तर दिन कति विते र ? संविधान आम नेपालीको हुन नसकेको भन्दै गुनासोहरु उठन थालेका छन् । चित्त दुःखाईका भाषाहरु प्रयोग गरिन थालेका छन् । हुन पनि संविधान अपरिवर्तनीय हुन्न कुनै पनि देशका । नेपालको पनि त्यही हो, समय सापेक्ष अर्थात गर्न पर्ने अवस्था आवश्यक बोध गरेको खण्डमा संविधान संशोधन हुन्छ नै । तर संविधान कागजको खोस्टो हो भन्ने चै कसैले नठाने हुन्छ ।
चित्त दुखाउनेहरुको चित्त दुखाई आफ्नै ठाउँमा होला । तर संविधानको अक्षरस पालना, संविधानको सम्मान र यस्ले दिएको अधिकारको मर्म बुझेर काम पनि भएको भने छैन । मुुलुकका अग्रणी दलहरु नै संविधानको मान मर्दनमा लागिपरेका छन् । आफु अनुकुल व्याख्या गर्न तिनै दलहरु उद्दत छन् । जारी भएको सात बर्ष भित्रै संविधानले संकटका साढे साती नै भोग्नु पर्यो । अढैयाले दुःख दिए झै गरि धेरै पटक यस्ले पीडा पनि भोग्नै पर्यो । च्यात्ने र जलाउनेसम्मका दुस्साहस समेत गरिए । तर संविधानले दिएको अधिकारको मर्म बुझेर को अघि बढेको छ ? एकपटक सबैले छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला भएको छ ।
राजनीतिक दलहरुको लुँछाचुँडी, संघीय संसदको बारम्बार अवहेलना मात्र नभइ, मुलुकमा देखिएका अस्थिरताले संविधानमाथि बारम्बार आक्रमणको दुष्चेष्टा नगरेको होइन । राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित, गणतन्त्रको प्रतीक र संविधानको पालक संस्था विवादरहित बन्न नसक्नु,न्यायालयका न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अन्य कामकारवाहीमा हस्तक्षेपमा आभास प्रत्यक्षरुपमा हुनु, प्रतिनिधिसभाको बारम्बार विघटन गर्ने दुष्प्रयास हुनु र संवैधानिक अंग तथा निकायहरुमा गरिएको नियुक्तिहरुमा असंवैधानिक चरित्र र व्यवहार प्रदशर्न गर्नुले पनि सविधानमाथि धेरै पटक आघात पुुर्याइयो ।
२०७२ सालमा संधिवान जारी भएसंगै मुलुकको शासन व्यवस्थाको शैली फेरियो, एकात्मकबाट मुलुक संघीयतामा पुग्यो, राजतन्त्रबाट मुलुक गणतान्त्रिक मुलुकका औपचारिकरुपमा प्रवेश गर्यो । धेरै कुरा फेरिए तर संस्कार उही रहयो । दलहरु उही हुन् , चित्र र चरित्र उही । यिनीहरु फेरिन नसक्दा संविधान जतिसुकै प्रगतिशील भएपनि के भयो र ? उही संस्कार उही चरित्र र उही व्यवहार । संविधान जस्तै उनीहरु पनि गतिशील र परिवर्तित भए मुलुकले पनि परिवर्तनको आभाष पक्कै पाउथ्यो । देशले पनि काँचुली फेर्ने अवसर निश्चितरुपमा पाउथ्यो । तर खोई त परिवर्तनको आभाष, परिवर्तनको महसुस आम नेपाली जनतामा । त्यसैले दोष अहिले फेरि उही संविधानले बोक्नु पर्ने अवस्था आउँदैछ । उनै प्रिय संविधानले पीडा भोग्नु पर्ने अवस्था देखिदैछ । यस अघि २०४७ सालको संविधानलाई पनि संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनिएकै हो नि । तर १६ बर्ष पनि लागेन त्यो उत्कृष्ट भनिएको संधिवान फेर्नै पर्यो आखिरी । किन त ? समीक्षा गर्ने फुर्सद् कसैलाई कहिल्यै भयो र ?
मधेसको आफ्नो दुखेसो छ । मधेस केन्द्रित दलहरु त्यही संविधान अनुरुपको सपथ खाएर सरकारमा पनि जान्छन तर संविधानमा त्रुटि भएको कुरा उनीहरु मधेस पस्ने वित्तिकै देख्छन् । कहिले उदाउँने कहिले अस्ताउँने मधेस केन्द्रित दलहरुको संविधान संशोधनको माग सत्तामा चढ्ने भर्याङ भन्दा शिवाय केही नभएको प्रष्ट हुन थालेको मधेसकै जनताले बोल्न थालिसके । त्यसैले पनि दोष संविधानको होइन, दोष तिनीहरुमा छ जस्ले देश हाँकिरहेका छन्,जस्ले संविधानमा खोट देखाएर राजनीति गर्न खोजिरहेका छन् ।
हाम्रो छिमेकको एउटा देश अर्थात नामै तोकेर भन्नु पर्दा भारतले अझै पनि नेपालको संविधानको स्वागत गरेको छैन । संविधान जारी हुने वित्तिकै उस्ले यो देशमा कठोर नाकावन्दी पनि लगायो । हामीले उस्को संविधानमा कहिल्यै प्रश्न उठाएनौं , उस्को गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसमा पनि शुभकामना दिएकै छौ । के नेपालको संविधान उस्को अनुकुल भएन र , कस्तो छिमेकी भनेर नेपाली जनताले प्रश्न सोध्न थालेको पनि धेरै वर्ष वित्यो । नेपाल भित्रका नै केहीले देखाएको चित्त दुःखाई उतैको भक्तिगान् त होइन । यो कुरा भने अब आम नेपाली जनताले गम्भीर भएर नियाल्नै पर्छ । छन् होला कमजोरी संविधानमा, तर त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने तरिका हुन्छ । तर संविधान कसैको लागि पनि बार्गेनिङको विषय कहिले बनाइनु हुँदैन् । संविधानमा सबैको माया र सम्मानको अनुभूति जहिले पनि उनिरहनु पर्छ । सबै नेपालीका लागि फूलको साझा माला बनेर ।